🥇 VPN azo antoka sy azo ianteherana: VPN 10 ambony indrindra amin'ny 2022
VPN azo antoka
✅ VPN maimaim-poana
🥇 VPN tsara indrindra
VPN ho an'ny PC
Isaky ny misy izy ireo mpampiasa maro kokoa no miahiahy momba ny fiarovana azy (ary noho izany dia liana amin'ny VPN) noho ny fitomboan'ny fandrahonana an-tserasera sy ny tranganà fitsikilovana goavana izay lasa fampahalalam-baovao. Vao mainka aza amin'ny fotoan'ny areti-mifindra, rehefa manery ny maro hifandray amin'ny telecommute ny SARS-CoV-2, izay midika hoe mitantana angon-drakitra saro-pady na tsy miankina amin'ny tambajotra an-trano izay mety tsy misy fepetra fiarovana ara-barotra.
Ny VPN dia tsy afaka manome anao fiarovana fanampiny ho an'ny biraonao na fifandraisana an-trano, fa afaka manampy anao amin'ny fomba hafa ihany koa. Ohatra, azonao atao ny manova ny niandohan'ny IP anao araka izay tianao, afaka misafidy ny firenena niaviany ianao fidirana amin'ny serivisy voafetra na voafetra ho an'ny firenena niaviany. Zavatra mahasarika mpampiasa maro, indrindra fa ny serivisy votoaty mivantana, amin'ny VPN.
Anisan'ireo serivisy vpn tsara indrindra Manoro hevitra ity Top10 ity izahay:
VPN premium mora vidy. Ny endri-javatra miavaka dia:
IP avy amin'ny firenena 59
6 fitaovana miaraka
Misongadina amin'ny fampiroboroboana azy
Tsidiho ny tranokalany
IP avy amin'ny firenena 90
7 fitaovana miaraka
Misongadina amin'ny fiarovana azy
IP avy amin'ny firenena 61
Misongadina amin'ny vidiny
IP avy amin'ny firenena 94
5 fitaovana miaraka
Misongadina amin'ny kalitaon'ny serivisy
IP avy amin'ny firenena 74
Misongadina amin'ny vidiny kalitao
IP avy amin'ny firenena 80
Voamarika noho ny hafainganam-pandehany
IP avy amin'ny firenena 22
Misongadina amin'ny serivisy teknika
Afeno ny borikiko!
IP avy amin'ny firenena 190
10 fitaovana miaraka
Tena tsara ho an'ny P2P sy Torrent
IP avy amin'ny firenena 46
Mety tsara ampiasaina amin'ny Netflix
IP avy amin'ny firenena 56
Safidy tsara ho an'ny fianakaviana
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny VPN
Alohan'ny hanakarama VPN mila fantatrao andiam-pitsipika mba hahafahanao misafidy izay mifanaraka amin'ny filanao ary koa hamaritana raha tena mila serivisy VPN ianao na tsia.
Una VPN (tambajotra virtoaly), na tambajotra tsy miankina virtoaly, dia serivisy ahafahanao mifandray amin'ny tambajotra toy ny Internet amin'ny fomba azo antoka. Mba hanaovana izany, dia ampiasaina ny fanakorontanana ny niandohan'ny fifamoivoizan'ny tambajotra, manome IP tsy mitovy amin'ilay voalohany nomen'ny mpanome tolotra aterineto anao (ISP).
Ary koa, ny VPN dia hamorona "tonelina” mifandray amin'ny fifamoivoizana miafina, izany hoe, ny fifamoivoizana angon-drakitra miditra sy mivoaka rehetra dia harovana amin'ny alàlan'ny algorithm encryption mba tsy ahafahan'ny antoko fahatelo manakana azy ireo amin'ny lahatsoratra tsotra amin'ny alàlan'ny fanafihana mampiasa sniffers (sniffers packet network) toy ny fanafihana karazana MitM (Man in the Middle), ary dia hijanona ho miafina amin'ny serivisy sy mpamatsy sasany izay afaka misambotra ny fifamoivoizanao sy mitahiry izany.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia misy "effet secondaire" fanampiny. Ohatra, amin'ny fanovana ny IP dia hamela anao koa izany miditra amin'ny atiny izay voafetra na voafetra ao amin'ny faritra ara-jeografikao. Ohatra, azo antoka fa nanandrana nijery fantsona mivantana avy any amin'ny firenena hafa ianao ary mampiseho anao hafatra mampahafantatra anao fa io serivisy io dia tsy misy afa-tsy amin'ny mpampiasa avy amin'io firenena io. Eny, ity karazana fameperana ity dia azo ialana amin'ny VPN…
maimaim-poana vs voaloa
Misy dia misy serivisy VPN maimaim-poana tanteraka, sy ireo karama hafa izay manolotra serivisy maimaim-poana voafetra. Rehefa mieritreritra ny hampiasa VPN ianao dia satria mila fiarovana ambony indrindra ianao na miditra amin'ny serivisy voafetra ao amin'ny faritra misy anao. Ary tsy zavatra tokony ankininao amin'ny serivisy maimaim-poana izany.
Ny iray amin'ireo antony dia satria ny serivisy maimaim-poana dia manana ambaratonga ambany kokoa amin'ny fiarovana fa indrindra indrindra, satria manana famerana ny fifamoivoizana isan'andro, isan-kerinandro na isam-bolana. Izany dia hisakana anao tsy ho afaka hampiasa fatratra ireo maimaim-poana ary tsy azo atao izany amin'ny serivisy horonan-tsarimihetsika izay mandany data be dia be (indrindra raha HD na 4K izy ireo). Ary ny ratsy kokoa, ny serivisy VPN maimaim-poana dia tsy mamela anao hiasa amin'ny serivisy streaming amin'ny tranga maro.
Noho izany, rehefa miditra amin'ny iray amin'ireo serivisy VPN maimaim-poana ianao ho diso fanantenana ianao ary miafara amin'ny serivisy karamaina amin'ny tsy fahazoana izay tena tadiavinao. Ankoatr'izay, ny serivisy karama dia tsy voatery ho lafo, lavitra izany, misy tolotra be ranony izay ahafahanao manana serivisy premium mandritra ny euros vitsivitsy isam-bolana.
avy amin'ny3, 10 €
avy amin'ny2, 75 €
avy amin'ny1, 79 €
Ary tsarovy izay lazainy, rehefa misy zavatra maimaim-poana, ny vokatra dia ianao. Izany hoe, misy serivisy maimaim-poana hanara-maso ny hetsikao ary afaka mampiasa azy io hivarotana azy amin'ny antoko fahatelo, hanehoana doka araka ny safidinao, na hahazoana karazana fiverenana ara-toekarena ho azy. Noho izany, manolotra serivisy maimaim-poana izy ireo, saingy mahazo tombony amin'ny lafiny iray…
Ny serivisy hafa dia mety mivarotra bandwidth amin'ny mpanjifa hafa amin'ny serivisy fandoavanao. Izany hoe, mampiasa ampahany amin'ny loharanonao izy ireo mba hamindrana azy ireo amin'ireo mpampiasa manana kaonty premium.
VPN antoko fahatelo sa anao manokana?
Marina fa azonao atao mamorona VPN anao manokana mampiasa mpizara misy GNU/Linux sy OpenVPN (na rafitra fandidiana hafa sy rindrambaiko mitovy aminy). Saingy ity karazana VPN ity dia ho voafetra kokoa amin'ny resaka hafainganam-pandeha amin'ny alàlan'ny bandwidth tambajotra ary tsy maintsy manao ny fanamafisana sy fitantanana ny tenanao ianao, ary tafiditra ao anatin'izany koa ny fiatrehana olana ara-teknika mety hitranga amin'ny mpizara.
Tsy safidy ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izany, na ho an'ny mpampiasa matihanina maro aza. Noho izany, ny aina indrindra manao fifanarahana amin'ny serivisy VPN antoko fahatelo ary ankafizo ny fampiononana atolony. Amin'ity tranga ity, tsy maintsy manahy momba ny fametrahana ny mpanjifa ianao ary manomboka mankafy ny serivisy manomboka amin'ny andro voalohany.
Safidy tsara ve ny mividy router VPN?
Marina fa misy koa ny router sasany, na ny router, izany manolotra VPN efa tafiditra izy ireo. Izy ireo dia router premium izay matetika lafo kokoa noho ny salan'isa, saingy manolotra andiana tombony mahaliana sy serivisy fanampiny. Ohatra, afaka mahita ohatra vitsivitsy ianao toy ny:
Ireo singa mifandraika amin'ny DIR-885L/R
Na dia safidy tsara aza izany amin'ny tranga sasany, Tokony hitandrina ianao miaraka amin'ny modely router VPN mora vidy. Ny sasany amin'izy ireo dia manondro fa manana io karazana serivisy io izy ireo saingy manondro ny mpanjifa ihany, ary tsy manana ny serivisy omen'ny mpizara. Noho izany, tsy maintsy manakarama serivisy an'ny antoko fahatelo ihany koa ianao mba hahatonga azy io hiasa.
Mba tsy hanananao olana, dia nanao fitambarana ireo router VPN tsara indrindra azonao idirana amin'ny fanindriana ny bokotra manaraka:
Jereo ny VPN Routers
Tandremo ity! Maro no mividy ny iray amin'ireo routers ireo ary manana fiadanan-tsaina, fa ny angon-drakitra dia mbola tsy voaaro.
Tombontsoa amin'ny fampiasana VPN
Tahaka ny vokatra sy serivisy hafa rehetra, ny VPN dia manana ny tombony sy ny lafy ratsiny. Saingy azo antoka fa ny tombony dia mahery kokoa handresena lahatra anao hanakarama azy:
Encryption ny fifamoivoizana tambajotra mba tsy hafindra amin'ny soratra tsotra sy hanajana ny tsiambaratelo ny angon-drakitrao (tsy azon'ny antoko fahatelo idirana raha tsy nahazoana alalana ny vaovao nafindra eo amin'ny mpandefa sy ny mpandray). Ary tafiditra ao anatin'izany ny fifamoivoizana rehetra, fa tsy toy ny mpizara proxy azonao amboarina ho an'ny navigateur web na ho an'ny fampiharana manokana. Amin'ity tranga ity, ny fifamoivoizana rehetra avy amin'ny fitaovanao dia ho voaro.
Ny fiainana manokana sy tsy mitonona anarana. Tsy ho an'ny encryption ihany, fa koa hanafenana ny niandohan'ny IP.
Fameperana bypass ao amin'ny faritra ara-jeografikao mampiasa IP avy amin'ny firenena hafa izay hiasan'ny serivisy tsy misy fetra.
Mpanome Internet anao na ISP (Telefónica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone,…) tsy ho fantatrao ny fampiasanao ny fifandraisanao. Raha tsy misy VPN dia afaka mahafantatra ny pejy tsidihinao, raha misintona votoaty piraty ianao, sns. Izany dia satria ny fifamoivoizana rehetra dia handeha amin'ny lohamiliny ary hisy firaketana momba izany. Fanampin'izany, takian'ny lalàna ny ISP hitahiry ny angona toy izany mandritra ny taona maromaro. Ireo angona rehetra ireo dia azo amidy na afindra any amin'ny orinasa dokam-barotra, sampan-draharaham-panjakana, sns.
ny fahamarinan'ny angona, ka rehefa tonga any amin'ny toerana halehany izy ireo dia mitovy amin'izay niala tamin'ny niaviany. Izany hoe tsy ovaina eny an-dalana.
Ny VPN dia tena tsotra, ary indraindray dia ilaina ihany ny manindry bokotra iray hanombohana na hampijanonana azy. Fa kosa, ny tolotra hafa hafa toy ny mpizara proxy, sy ny fepetra fiarovana hafa, dia mety hidika ho sarotra kokoa.
fahavaratra. Na dia misy vidiny aza, dia ambany lavitra noho ny an'ny serivisy hafa na fandoavam-bola ho an'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana izay afaka miantoka ny tambajotra.
Ny tsy fahampian'ny VPN
Azo antoka fa tsy manana VPN Teboka ratsy tena miavaka. Teboka roa ihany no azo asongadina amin'izany hetsika manohitra izany:
Price: Na dia misy aza ny maimaim-poana dia efa naneho hevitra aho fa tsy mety indrindra. Noho izany, mba hanana VPN tsara dia mila mandoa ianao. Na izany aza, tsy lafo izy ireo ary azo atao amin'ny ankamaroan'ny olona. Miaraka amin'ny router miaraka amin'ny VPN azonao atao ihany koa ny misoroka ireo sara ireo…
Hafainganam-pifandraisana: Mazava ho azy fa rehefa manao encryption ny angon-drakitra dia tsy maintsy atao encryption sy decryption izany mba hahitanao azy toy ny hoe tsy manana VPN ianao. Izany hoe, na dia mangarahara aminao aza izany, fa izany dia heverina ho enta-mavesatra fanampiny izay hampihena ny hafainganam-pandeha. Raha manana tsipika ADSL, fibre optique, na 4G/5G haingana ianao, dia tsy ho olana loatra izany. Mety hanimba ihany ny fifandraisana miadana (na rehefa manana karazana fetran'ny angon-drakitra ianao ary mampiadana anao mandritra ny volana).
Fa maninona no mila VPN aho?
Andramo ny NordVPN
Tokony handinika ianao raha misy dikany ny fananana VPN amin'ny tranga manokana misy anao. Amin'ny ankapobeny, noho ny antony manokana sy ny fiarovana fotsiny, dia mendrika izany. Raha ny marina, ny fiainana manokana dia zo amin'ny tambajotra izay voahitsakitsaka isan'andro amin'ny orinasa lehibe. Miaraka amin'ny VPN dia afaka mametraka vahaolana amin'izany ianao. Saingy na inona na inona izany dia misy ihany koa ny hafa ny antony ilanao VPN:
SARS-CoV-2: Nanova ny fiaraha-monina ny areti-mifindra ary nanova ny fomba fiasa amin'ny fomba maro, eo amin'ny toeram-piasana ihany koa. Ankehitriny dia misy orinasa maro sy freelancer miasa an-telefaona. Tafiditra amin'izany ny fampiasana ny fitaovanao manokana hifandraisana (jereo ny BYOD) sy ny tambajotra an-tranonao. Orinasa maro no mitantana angon-drakitra saro-pady amin'ny mpanjifa (angona hetra, sary tsy miankina, fampahalalana voaaro amin'ny fananana ara-tsaina, angon-drakitra ara-pitsaboana,…) ary raha tsy misy VPN dia mety ho mora voaporitsaka na voasambotry ny antoko fahatelo tsy nahazoana alalana izy ireo.
Arovy ny angona fitetezanao: Amin'ny VPN dia manana sosona fiarovana fanampiny ianao araka ny nolazaiko tamin'ny teboka teo aloha. Tena ilaina tokoa izany rehefa mampiasa fifandraisana WiFi ho an'ny daholobe na tsy azo antoka ianao mba hidirana amin'ny serivisy banky sasany, sns., raha tsy misy olon-kafa afaka manakana ny tenimiafina sy karazana fahazoan-dàlana na angon-drakitra nampidirina.
Bypass Internet sivana: Raha sendra serivisy na fampiharana tsy hita ao amin'ny faritra ara-jeografika misy anao ianao, miaraka amin'ny VPN dia azonao atao ny miditra izany amin'ny fahazoana IP avy amin'ny firenena hafa. Tena azo ampiharina izany raha mijery fantsona an-tserasera sasany, miditra amin'ny votoaty tsy hita amin'ny sehatra fandefasana streaming sasany (AppleTV, Netflix, Disney+, F1 TV Pro,...), ary na dia ho an'ny fampiharana voafetra sasany ao amin'ny Google Play, App Store, sns sns.
P2P sy Torrent Downloads: hisintona votoaty avy amin'ny tambajotra Torrent na P2P, ankoatry ny tranonkala hafa hisintonana votoaty piraty na tsy ara-dalàna, azonao atao ny miantehitra amin'ny VPN iray hanao izany amin'ny fomba tsy mitonona anarana ary tsy fantatry ny ISP an'io hetsika io. Na dia tsy ara-dalàna aza izany ary ho an'ny tenanao manokana no hanaovanao izany…
Araka ny hitanao dia mandeha ny fampiharana VPN mihoatra ny fiarovana tsotra...
Inona no tokony ho fantatro mba hisafidianana ny VPN tsara indrindra?
Misy ny sasany pitsopitsony ara-teknika tokony hojerenao indrindra rehefa mampitaha serivisy VPN sasany izay isalasalanao. Izy ireo dia mety ho famantarana tsara hamaritana ny kalitaon'ny serivisy ary raha mifanaraka kokoa amin'ny filanao.
Isan'ny mpizara sy IP
NordVPN AES-256 fifadian-kanina Avy amin'ny firenena 59 6 miaraka fisondrotana
CyberGhost AES-256 fifadian-kanina Avy amin'ny firenena 90 7 miaraka fiarovana
Surfshark AES-256 fifadian-kanina Avy amin'ny firenena 61 manam-petra vidiny
ExpressVPN AES-256 tsara Avy amin'ny firenena 94 5 miaraka Ny kalitaon'ny serivisy
ZenMate AES-256 tsara Avy amin'ny firenena 74 manam-petra
hidirana Shield AES-256 fifadian-kanina Avy amin'ny firenena 80 5 fitaovana hafainganam-pandeha
TunnelBear AES-256 tsara Avy amin'ny firenena 22 5 fitaovana Serivisy teknika
Afeno ny borikiko! AES-256 fifadian-kanina Avy amin'ny firenena 190 10 miaraka Tena tsara ho an'ny fampidinana P2P sy Torrent
ProtonVPN AES-256 tsara Avy amin'ny firenena 46 10 miaraka Mety tsara ampiasaina amin'ny Netflix
PrivateVPN AES-256 tsara Avy amin'ny firenena 56 6 miaraka Safidy tsara ho an'ny fianakaviana
Ny serivisy VPN sasany dia manana mpizara marobe miparitaka manerana ny firenena maro, izay ho tombony mazava. Ankoatra izany, ny sasany dia manome anao a IP samihafa kisendrasendra, fa ny serivisy hafa dia mandeha lavitra ary mamela anao hisafidy ny niandohan'ilay IP.
Tena mahaliana ho an'ny serivisy na votoaty voafetra. Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe te hiditra amin'ny serivisy izay tsy misy afa-tsy any Soeda ianao. Miaraka amin'ny iray amin'ireo VPN ireo dia afaka mahazo IP Soedoà ianao ary miditra toy ny hoe Soedoà iray hafa ianao...
Iray amin'ireo angona manan-danja indrindra ho an'ny fiarovana avy amin'ny serivisy. Mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazany koa izany. Mazava ho azy fa ny fiarovana bebe kokoa dia ny hafainganam-pandeha very, na dia efa nitantana tamin'ny alalan'ny teknolojia sasany aza ny serivisy VPN kalitao sasany ka tsy izany no izy ary afaka manome hafainganam-pandeha sy fiarovana tsara.
Isaky ny misafidy VPN ianao dia tokony hifidy iray manana algorithm encryption matanjaka izay tsy misy vulnerability fantatra. Iray amin'ireo Ny algorithm dia AES-256izay safidy lehibe. Raha ny marina, maro amin'ireo serivisy fandoavam-bola no misafidy ny fiarovana amin'ny kilasy miaramila, izay anisan'ny avo indrindra.
Ho fanampin'ny fanafenana, ny serivisy fandoavam-bola sasany dia manana teknolojia na fepetra fiarovana fanampiny ho an'ny mpanjifany. Fa na izany aza, ialao ny algorithm tsy azo antoka toy ny SHA-1, MD4, ary MD5 izay voahitsakitsaka.
Ary tadidio fa tsy misy rafitra azo antoka 100%. Ny zavatra mampidi-doza indrindra dia ny mino fa tsy azo resena ianao. Raha ny marina, ny sasany cybercriminals Afaka nanitsakitsaka ireo fifandraisana ireo izy ireo tamin'ny alàlan'ny fanararaotana karazana vulnerable na fomba hafa hosoka toy ny halatra fanalahidy.
Izy io dia iray amin'ireo angona manan-danja indrindra raha tsy tianao ny VPN hanakivy anao hafainganam-pandehan'ny tambajotra amin'ny fomba lehibe. Noho izany, tsy maintsy misafidy serivisy amin'ny hafainganam-pandeha tsara foana ianao. Maro amin'ireo tolotra ankehitriny no manolotra tolotra manana hafainganam-pandeha avo be, ka tsy ho olana loatra izany, indrindra raha mampiasa fifandraisana haingana (ADSL, fibre optique,...).
Tsy ny tambajotra mihitsy no tiako holazaina, fa ny angon-drakitra azon'ny mpanome tolotra VPN tehirizina. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny angon-drakitra dia tsy handalo amin'ny mpizara ISP, fa handalo ny an'ny VPN mpamatsy.
Ny sasany amin'ireo mpamatsy tehirizo ny angona diary toy ny anaranao, ny antsipiriany momba ny fandoavam-bola, ny tena IP anao, sns. Data afaka manampy hamantatra anao. Izany no soso-kevitra, noho izany dia tokony hamaky ny printy tsara ianao raha mitahiry an'io data io na tsia ireo mpamatsy ireo. Mitandrema amin'ireo izay mitazona azy ireo ary safidio foana ireo izay mitahiry firaketana kely indrindra.
Tsy ampy ny serivisy VPN maimaim-poana sasany ara-teknika na serivisy mpanjifa sa tena mahantra. Raha ny momba ny serivisy fandoavam-bola dia matetika no tsara kokoa izany ary 24/7 (24 ora sy 7 andro isan-kerinandro), saingy tsy mitovy izany amin'ny tranga rehetra.
Ny serivisy sasany dia manome saina fotsiny amin'ny teny Anglisy, ny hafa dia hanana izany amin'ny teny espaniola. Matetika izy ireo dia samy amin'ny antso an-telefaona na amin'ny mailaka, ary ny sasany aza dia manana chat mivantana hamaly ny fanontanianao na hamaha ny olana mety hitranga.
Fanohanana na sehatra
Ny serivisy VPN maimaim-poana dia manana fanohanana kely, fa ny ankamaroan'ny karama dia manana fanohanana lehibe amin'ny sehatra tohana. Ireo serivisy ireo dia manana programa mpanjifa izay azo apetraka amin'ny rafitra fiasa isan-karazany toy ny Windows, macOS, Linux, Android, iOS, sns. Ny sasany aza dia mamela izany hatao amin'ny fahitalavitra marani-tsaina sasany sy amin'ny navigateur amin'ny alàlan'ny add-ons.
Jereo tsara ny karazana rafitra miasa ampiasainao any an-trano na any am-piasana ary mifidiana mpanome VPN afaka manolotra anao a mpanjifa ofisialy tohanana.
Ireo mpanjifa resahiko ao amin'ny fizarana teo aloha dia manana interface grafika izay mety ho mihoatra na latsaka friendly. Mazàna dia tsotra izy ireo ary tsy mila fahaiza-manao amin'ny solosaina ianao hamelomana sy hamonoana ny VPN na hanaovana fanovana sasany.
Matetika dia tsotra toy ny fampandehanana ny mpanjifa VPN sy Tsindrio bokotra ka ny serivisy dia mavitrika ary manomboka manao ny "majika".
Amin'ny serivisy VPN karama dia azonao jerena fomba maro handoavana ny famandrihana. Ireto fomba fandoavam-bola ireto dia mety ho maromaro:
Carte de crédit: Mahazo aina sy mahazatra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izany.
PayPal: ny sehatra sasany dia manaiky fandoavam-bola amin'ny alàlan'ity sehatra azo antoka ity izay ilanao fotsiny ny mailakao.
App stores: Ny VPN sasany ho an'ny sehatra finday dia mamela ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny serivisy fandoavam-bola amin'ny fivarotana fampiharana amin'ny sehatra finday, toy ny Google Play, App Store, sns.
Cryptocurrencies: Ny vola crypto dia mamela ny fandoavam-bola tsy fantatra anarana, toy ny natao tamin'ny Bitcoin. Mpanome VPN maro no manohana ity karazana fandoavam-bola cryptocurrency ity.
ny hafa: Misy koa manohana fomba hafa hafa.
Ny fangatahan'ny DMCA
Angamba tsy maneno lakolosy ilay teny DMCA, fa teny iray ilazana ny lalàna miaro ny zon'ny mpamorona any Etazonia. Ity lalàna ity dia miaro ny karazana votoaty rehetra toy ny sarimihetsika, mozika, rindrambaiko, boky, sns, amin'ny piraty.
Ary inona no ifandraisan'izany amin'ny VPN? Tsotra ihany, manana ny foibeny ny mpamatsy VPN sasany any amin'ireo firenena manana lalàna izay tsy mieritreritra ny hamaly ny fangatahana avy any Etazonia rehefa misy hetsika hosoka natao. Izany hoe ao anatin’izy ireo fialofana ara-dalàna izay miaro ny mpanjifany raha angatahina hotsaraina.
Saingy tsy ny serivisy VPN rehetra no miasa amin'ity karazana paradisa ity ivelan'ireo lalàna ireo, ny sasany dia any amin'ny faritany misy azy ireo. Horaisina ireo fangatahana ireo.. Ka raha mampiasa ny VPN anao amin'ny hetsika heloka bevava ianao dia tokony handinika izany. Na izany aza, avy amin'ity bilaogy ity dia tsy mamporisika ny fampiasana hosoka izahay…
2.0.0.1 Misongadina amin'ny fampiroboroboana azy
3.0.0.1 Misongadina amin'ny fiarovana azy
4.0.0.1 Misongadina amin'ny vidiny
5.0.0.1 Misongadina amin'ny kalitaon'ny serivisy
6.0.0.1 Misongadina amin'ny vidiny kalitao
7 hidirana Shield
7.0.0.1 Voamarika noho ny hafainganam-pandehany
8.0.0.1 Misongadina amin'ny serivisy teknika
9 Afeno ny borikiko!
9.0.0.1 Tena tsara ho an'ny P2P sy Torrent
10.0.0.1 Mety tsara ampiasaina amin'ny Netflix
11.0.0.1 Safidy tsara ho an'ny fianakaviana
12 Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny VPN
12.1 Inona ny atao hoe VPN?
12.2 maimaim-poana vs voaloa
13 VPN ankafizinay
13.1 VPN antoko fahatelo sa anao manokana?
13.2 Safidy tsara ve ny mividy router VPN?
13.3 Tombontsoa amin'ny fampiasana VPN
13.4 Ny tsy fahampian'ny VPN
13.5 Fa maninona no mila VPN aho?
14.0.0.1 Misongadina amin'ny fampiroboroboana azy
15 Inona no tokony ho fantatro mba hisafidianana ny VPN tsara indrindra?
15.0.5 Salama VPN
15.0.6 hidirana Shield
15.0.12 Kitiho VPN
15.1 Isan'ny mpizara sy IP
15.2 Algorithme enkripsi
15.4 Tsiambaratelo sy tsiambaratelo
15.5 tohana ara-teknika
15.6 Fanohanana na sehatra
15.7 GUI sariaka
15.8 Fomba fandoavana
15.9 Ny fangatahan'ny DMCA
VPN ho an'ny Android
Manorata hafatra ho anay